स्कुले बालिकाको यस्तो प्रतिभा, जसको नृत्य हेरियो १ करोड भन्दा बढी पटक ! (भिडियो हेर्नुहोस)
हामी नेपालमा विभिन्न प्रतिभाहरु दिनानुदिन देख्न पाउछौ । समयको परिवर्तन संगै हाम्रो मानसिकता, हाम्रो ब्यक्तित्व, क्षमता फरक हुँदै गएको छ । केही समय अगाडि सम्म बोल्न, हिड्न अन्कनाउने नेपाली समाज आजभोली निर्धक्क आफ्नो बिचार ब्यक्त गर्दछन । क्षमता प्रदर्शन गर्दछन। यो सबैको लागि गौरवको कुरा हो ।
यस्तै पोखरा २५ हेम्जाका ग्राम प्रकाश बेशिक स्कुल कार्यक्रममा भएको एक कार्यक्रममा भएको एक नृत्यमा बालिकाले निर्धक्क, आनन्दले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेको देख्न सकिन्छ । नृत्यमा यस्तो देखिन्छ, उनी नृत्यमा छिन र उनी मात्र छिन । उनको ध्यान पुर्ण रुपमा नृत्यमा मात्र छ । काले दाइ बोलको गितमा नाचेकी यी बालिकाको नृत्य १ बर्षको समयमा १ करोड २५ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । १३ हजार भन्दा बढी लाईक छन । हामिले झलक लामिछाने युट्युव च्यानलबाट लिएको यो भिडियोमा बालिकाको नाम भने खुलाईएको छैन । भिडियो हेर्नुहोस !
* प्रतिभा भन्ने चिज लुकाउने होइन, देखाउने हो : आश्मा
आश्मा विश्वकर्मा अर्थात चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुन क्रुकी डान्सर । उनी क्रुकी रानी भनेर समेत चिनिन्छन् । ठमाडौंको असनमा जन्मिएकी आश्मा सानैदेखि नृत्य गर्न रुचाउँथिन् । उनी विद्यालयमा पढ्दै गर्दादेखि नै बिगर डान्स गर्थिन् । मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी आश्माका बाबु–आमालाई भने आश्माले रोजेको बाटो पटक्कै चित्त बुझेको थिएन ।